पृथ्वीनारायणले काठमाडौंमा किन बसाले मगरबस्ती ?
२०७६ पौष २६ शनिबार ०८:५०:००
सेनापुत्र कृष्णकुमार राना जंगी जागिरमा नजोडिई कीर्तिपुर केन्द्रीय पुस्तकालयमा जागिरिन्छन् । साठी वर्षीय रानाका चार छोराछोरीमध्ये एक अमेरिका छन्, दुईले मास्टरी गर्छन् भने एक छोरी बैंकमा अधिकृत । ‘हाम्रा पुर्खा गोर्खाबाट नुवाकोट हुँदै वनस्थली बसेछन् । पुख्र्याैली घर गोर्खा त हो, तर कुन गाउँ ? थाहा छैन,’ राना भन्छन्, ‘पृथ्वीनारायणले बसालेको भन्छन् ।’
गायक रवि थापामगर स्टुडियोमा अन्जु पन्तलाई भन्दै छन्, ‘...मेरा सबै खुसीहरू बाटोभरि ओछ्याइदिन्छु ।’ पुर्खाको जंगी जागिरमा नजोडिई मगरगाउँले रवि गायन क्षेत्रमा छन् । पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौं उपत्यका कब्जा गरेपछि रवि पुर्खालाई भैंसेपाटीस्थित मगरगाउँमा बसालेका हुन् । पुर्खा गोर्खा कुन ठाउँबाट आएका हुन् ? सेनाको कुन पदका हुन् ? लिखत छैन । मगरगाउँ नाउँका उपत्यकामा दुई गाउँ छन्, सानोठिमी र भैंसेपाटीमा । यी दुई गाउँका नाउँमा पुरानो बसपार्कबाट बस गुड्छन् । दुईमध्ये रवि भैंसेपाटीवाला मगरगाउँका हुन् । नाउँ नै मगरगाउँ नै नलेखिए पनि रैथाने मगरगाउँ भने उपत्यकामा दर्जन हाराहारी छन् ।
राजधानी सुरक्षार्थ उपत्यका पस्ने मुख्य नाका थानकोटवरपरका वानस्थली, नैकाप, माटीखेलमा मगर सेनाको बस्ती बसालेको देखिन्छ । त्यसैगरी उपत्यका भित्री भाग धोबीघाट, बल्खु, धापासी तिलिंगाटार, मगरगाउँ आदि भागमा मगरबस्ती छन् । २५१ वर्षअघि भादगाउँ कब्जा गर्ने मगर सेनाका कतिपयलाई सानोठिमीमा बसाल्छन् । बस्ती नाम रहन्छ, मगरगाउँ । मगरगाउँबाहेक चाँगुनारायण, सिपाडोलमा पनि मगरबस्ती छन् । तिब्बतसँग हुने व्यापारमा व्यापारिक थलोको रूपमा परिचित साँगामा मगरबस्ती छ ।
भक्तपुर मगरगाउँमा करिब पैंतालीस घर थापा, आठ घर राना र पाँच घर आले छन् । ‘तीन सय पचास मत छ । जुन मत वडामा जिताउन र हराउन काफी छ,’ मगरगाउँका वासुदेव थापामगर भन्छन्, ‘अहिले कांग्रेसबाट राम थापामगर वडाध्यक्ष छन् ।’ मगरगाउँकी हुन्, नेमकिपा पूर्वसांसद अनुराधा थापामगर । थानकोट डाँडामुनि माटीखेलकी हुन्, प्रदेश सांसद रमा आले । पंैतालीस घरधुरी भएको अर्को मगरगाउँ अर्थात् भैंसेपाटी मगरगाउँसहित अन्य मगरबस्तीका मगर पनि राजनीतिमा संलग्न छन् ।
पृथ्वीनारायण शाहको फौज पुर्खावाल काठमाडौं रैथाने मगरबस्तीमा भर्ती घट्दो छ । बाहिरका मगर समाजमा जसरी बेलायती सेना र सिंगापुर पुलिस हुने चलन छैन । भारतीय सेनामा जाने चलन एकदमै कम देखिन्छ । यसैगरी, निजामती सेवामा जाने संख्या पनि एकदमै सानो छ । जग्गा बेच्दै घर बनाएर घरभाडा आम्दानी स्रोत बनाउने रैथाने मगर संख्या बढ्दो छ । अंशबन्डा हुँदै जाँदा जग्गा साँगुरिएका छन् । युवाहरू अष्ट्रेलिया, युके, अमेरिका, कोरियामा पुगेका छन् ।
पृथ्वीनारायण र पुष्पकमल सत्ता दिलाउने र टिकाउने लडाकुमै कहिलेसम्म मगर सिमितिने ? लाहुरे संस्कृतिमा कहिलेसम्म लाहुरिने ? कुमार थापाको संगीत र जगदीश समालको यो गीत कहिलेसम्म गाइरहने, ‘...बलिदानको बाली लाउँछौ उठाउने हुन्छ अर्कै ।’जवाफ खोज्ने वेला घर्किसकेको छ ।